Vaovao amin'ny GNU / Linux ve ianao? Ity dia zavatra tokony ho fantatrao | Avy amin'ny Linux
Vaovao amin'ny GNU / Linux ve ianao? Ity dia zavatra tokony ho fantatrao
Raha mpampiasa ianao Windows, OS X na rafitra miasa hafa ankoatran'ny GNU / Linux, ity lahatsoratra ity dia natao ho anao, satria mitovy amin'izany ny sasany amin'ireo teboka izay tsy maintsy raisina rehefa «mifindra» avy amin'ny rafitra iray mankany amin'ny iray hafa.
Manomboka amin'ny fandraisana hevitra iray izay niantso ahy ny mpampiasa iray fotoana lasa izay Morgana, amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra mampiady hevitra indrindra nahazoanay Avy amin'ny Linux. Morgana Hoy izy:
… Zavatra iray no mazava: TSY ho an'ny rehetra ny Linux, mila mahazo izany ianao. Mitaky fahalianana, fikirizana, faharetana, fahalianana ary ny faniriana hiala amin'ny hakamoana ara-tsaina. Haintsika rehetra ny mifantina ny Linux. Safidio fotsiny ny iray amin'izy ireo, alatsaho ny patalohanao, aloavy ny habetsahan'ny tarika am-perinasa ary avelao ho voahitsakitsaka, mpitsikilo ary ampiasaina ianao.
Manana ny vidiny ny fahalalahana ary malalaka ny tsirairay manapa-kevitra raha te-handoa izany sa tsia. Iza no tsy maniry, avy eo manohy amin'ny fiainana miaraka amin'ny takelaka sy finday tsy misy tombontsoan'ny mpitantana (tsy miorim-paka ireo olona ireo) ary mandoa vola amin'ny OS mametra ny safidiny ho an'ny solosaina findainy. Ny fanomanana ny ovy sy ny fitsakoana azy dia lafo ary tsy vola ihany no andoavana azy ...
Raha tianao ny afaka manohy mampiasa (na inona na inona antony) ny Rafitra miasa misy anao (Windows, OS X) ankehitriny, saingy tadidio fa raha hiditra amin'ity tontolo mahavariana ity ianao dia aza manantena hahita zavatra mitovy amin'ilay nampiasanao. mankany
Inona no dikan'ity? Tsy azontsika antenaina izao manaraka izao avy amin'ny GNU / Linux:
Ilay malaza .exe o .M: Ie araka ny ahalalanao azy ireo tsy misy izy ireo. Tsy mahomby izay ananantsika .deb, .rpm, .tar.xz ary na dia mety amin'ny tranga sasany aza, mazàna izy ireo dia tsy apetraka amin'ny fipihana indroa ao amin'izy ireo.
Aza manantena ny .doc, .docx ary endrika hafa an'ny Microsoft Office aseho mitovy amin'ny LibreOffice, OpenOffice o Calligra. Na dia tsy taitaitra aza ianao, Birao Kingsoft mety hanamaivana kely ny olana io.
Satria mandeha amin'ny toeran'ny birao isika, aza manantena ny hahita amin'ny toerana misy anao ny loharano Arial, Tahoma, Verdana, Sics ny tantara an-tsary, Calibri, Lucida lehibe ary ny ambiny ao amin'ny Windows sy OS X. Eny, azonao atao ny mametraka azy ireo, nefa tsy tonga amin'ny fizarana izany.
Mila ny Speed, GTA V, Tontolo mpiaro ady ary lalao hafa an'arivony, manao veloma azy ireo, raha tsy hoe antenainao maka tahaka azy ireo amin'ny fampiasana izy ireo Divay. Mihatra amin'ny Photoshop, Corel draw, MS OfficeSns ...
Aza antenaina fa hiasa 100% ny fitaovana enti-miasa farany sy lehibe indrindra, ny karatra horonantsary ATI. Raha te hanana zavatra azo antoka ianao dia eritrereto Intel o NVidia.
Raha fantatrao izany NTFS y FAT32Ary lazaiko aminao fa tsy hoe ho hitanao izany GNU / Linux, eto isika Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS Ary ny sasany hafa.
Tsy misy tenemos Windows Explorermanana isika Dolphin, Nautilus, Thunar, PCManFM, ankoatry ny hafa, noho izany dia mila misafidy iray amin'izy ireo fotsiny ianao.
iTunes tsy manana isika, fa eny, Amarok, Clementine, Rhythmbox, Banshee… Ary maro hafa.
Fa ambonin'ny zavatra rehetra: Aza manantena ny GNU / Linux ho Windows sy OS X.
Mety hamaky an'ity ianao ary hahatsapa ho malahelo, diso fanantenana, na sosotra. Saingy tsy azontsika atao maivana koa ity fampahalalana ity. Miankina amin'ny Hardware, ny faniriana, ny filàna ary ny fahalalana, maro amin'ireo teboka teo aloha no azo vahana amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Ary raha misy antony tsy mety hamahana azy dia manana ny safidintsika foana isika Double Booting. Izay mitondra antsika amin'ny teboka manaraka.
1 Inona no fizarana nofidiko?
2 Veloma amin'ny hakamoana ara-tsaina
3 Aiza no hanombohako?
Inona no fizarana nofidiko?
Ny fizarana GNU / Linux tsy mitovy amin'ireo kinova ireo 200o, XP, View, Fito y 8 de Windows. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia tsy ireo kinova tsy mitovy amin'ny Operating System iray ihany.
Ho toy ny izany kosa izy ireo Windows 8 Ultimate, Windows 8 Professional, Windows 8 Enterprise, sns .. izany hoe, tsy samy hafa ny Operating Systems, fa ny tsiro samihafa.
Miankina amin'ny filantsika no ahitantsika fizarana vaovao nohavaozina, mora kokoa, tsara kokoa, fa raha ny tena izy dia mitovy daholo izy rehetra voam (na dia amin'ny kinova samihafa aza izy io, misy endri-javatra maro na kely kokoa).
Aza matahotra anefa toa sarotra izany nefa tsia. Rehefa mandeha ny fotoana, ary raha miditra amin'ity tontolo ity ianao dia ho hitanao ny fomba fahazoanao ny zava-drehetra ary ho hitanao fa mora ny mifidy izay fizarana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Misy ny fizarana notazomina sy notantanin'ny orinasa, ary misy ny hafa notazonina sy notarihin'ny fiarahamoninao. Ny roa tonta dia tsara kokoa noho ny iray hafa miorina amin'ny zava-misy fa tsy mitovy ny eritreritsika rehetra na ny filantsika mitovy.
Ohatra: Ubuntu Fantatra eran'izao tontolo izao amin'ny "Ny Linux mora ampiasaina". Ary mbola marina ihany amin'ny ampahany, saingy tsy io ihany no fizarana natao ho an'ireo mpampiasa vaovao, na ireo mpampiasa farany. Izany hoe, Ny GNU / Linux na Linux dia tsy Ubuntu fotsiny.
Ubuntu dia tantanan'ny orinasa iray antsoina hoe kanônika, ary ny ankamaroan'ny fanapaha-kevitra dia olona tokana: Mark Shuttleworth. Inona no dikan'ity? Izay raha tian'i Dadatoa Mark ho Ubuntu ny Ubuntu, na izany aza, tsy maninona na tianao ho Mena izany.
Ary avy eo dia mahita fizarana vondrom-piarahamonina bebe kokoa isika, ohatra Tanglu, izay ny mpampiasa azy no manapa-kevitra izay tafiditra ao fa tsy amin'ny fomba demokratika. Saingy azo atao izany Tanglu dia tsy manome mora na mora ampiasaina an'ny Ubuntu.
Ary eo no idiran'ny karazana mpampiasa. Misy olona faly toa izao, izany Ubuntu mamaha ny olan'izy ireo ary tsy miraharaha izy ireo na manga na mena. Ary mazava ho azy, misy ny olona mihevitra ny hafa.
Azonao ve ny hevitra tsia? Samy misafidy izay tadiaviny ary dia izay.
Veloma amin'ny hakamoana ara-tsaina
Raha nahatakatra zavatra nolazaiko tetsy ambony ianao ary mbola mieritreritra fa mety ho mpampiasa hafa GNU / Linux, avy eo dia tokony ho vonona ianao ka, na inona na inona fizarana, mora na sarotra kokoa, dia mila miala amin'ny hakamoana ara-tsaina ianao.
Noho izany, tokony ho vonona ianao:
Mianatra tsy tapaka ianao, vakio eto, vakio eo, ao amin'ny Forums, Manuals, Tutorials, News.
Tokony ho takatrao fa tsy ho mora foana ny mahazo fanampiana ary misy ireo izay hieritreritra fa adala ianao noho ny manontany fotsiny. Rehefa mitranga izany dia aza manahy ianao, mangataha tsy menatra, na inona na inona, ao ny Forum antsika.
Tokony hazava tsara ianao fa misy zavatra mety tsy mandeha araka ny antenainao, na raha tsy izany dia tsy mandeha amin'ny voalohany. Na dia mety ho gaga ianao ary mahita fa mandeha tsara kokoa noho ny nantenainy.
Al Terminal, hampionona o Shell Tsy azonao atahorana izany, tsy hanaikitra na hihinana anao izy, ny mifanohitra amin'izay dia hanamora ny fiainanao izany.
Raha misy zavatra tsy mety aminao dia aza mieritreritra an'izany GNU / Linux Ratsy io, na tsy mandeha, mieritreritra fa aleon'ilay mpanamboatra ny Fampiasa Hardware ampiasainao mandoa vola aminy ianao, ary amin'i Microsoft, hampandeha azy io.
Foana, farafahakeliny 99,9% amin'ny fotoana, misy ny solony.
Izany hoe, tokony ho vonona hieritreritra fomba hafa ianao. Ie toa ny voalaza ihany Apple (Mieritrereta hafa), fa samy hafa be. Izany hoe, Tsy izay omenao ahy no safidiko.
Aiza no hanombohako?
Raha aorian'ny famakiana izany rehetra izany (izay tsy mahasahana ny 100% amin'ireo zavatra tokony ho raisina) dia manapa-kevitra ianao fa te hahafantatra bebe kokoa, satria tsy mila mandeha lavitra ianao, eto ihany Avy amin'ny Linux manana fampahalalana mahasoa be dia be izahay:
fampiharana (Misimisy kokoa momba ny rindranasa sy ny fomba fiasan'izy ireo)
Fitsinjarana (Ianaro hoe iza izy ireo ary firy izy ireo)
Te hanandrana Linux ve ianao? Torolàlana ho an'ireo vao liana sy vaovao.
Saingy misy bebe kokoa, maro hafa ... mila mizaha fotsiny ireo sokajy misy anao ianao:
Bika aman'endrika sy ny personalization
Tambajotra sy seriver
Tutorials, Manuals, Tips, HowTo
Tsy maninona na Windows na OS X no ampiasainao, na rafi-piasana miasa hafa. Ny zava-dehibe dia tsy izy ireo ihany no OS misy na miasa. Misy zavatra mihoatra ny antsoina hoe GNU / Linux, * BSD y * NIX.
Raha manam-potoana, faharetana ary faniriana hianatra ianao, tsara raha mijery sy mijery ho anao raha mahay mampiasa azy ireo ianao na tsia. Raha manontany ahy izy ireo, raha hainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » Vaovao amin'ny GNU / Linux ve ianao? Ity dia zavatra tokony ho fantatrao
101 hevitra, avelao ny anao
Lahatsoratra tena tsara ho an'ny olona mieritreritra hahafantatra bebe kokoa momba an'ity tontolo mahavariana ity ary ambonin'izany rehetra izany dia TSY MORA, satria ny iray mianatra isan'andro.
Miarahaba anao ary pejy tena tsara, tohizo
Misaotra Sebastian tamin'ny fijanonana sy ny heviny.
Ireo teboka rehetra nolazainao ireo dia ny antony tsy ahombiazan'ny Linux ary tsy hahomby mihitsy eo amin'ny birao.
Ny olana dia tsy eken'ny Linux Taliban izany.
Raha tsikaritrareo, ny tanjoko amin'ity lahatsoratra ity dia tsy ny hanana fanehoan-kevitra toy izao, izay mihoatra ny fanoloran-kevitra marim-pototra, dia mamorona ady taloha ihany.
Na izany aza, azoko lazaina aminao fa ireo teboka ireo dia tsy ny antony lehibe mahatonga ny Linux tsy hahomby amin'ny Desktop (raha toa ka mikasa ny hanao izany), fa ny fanovana ny fomba fisainana matetika fotsiny dia mampivadi-po loatra ho an'ny sasany.
Yeretik dia hoy izy:
Miampanga an'i Ismael ianao fa ny fanamarihany dia "mamorona ady mitovy amin'ny mahazatra" ihany, raha ity lahatsoratra ity dia notoraham-bato ny sisa amin'ireo rafitra fiasa sy ny mpampiasa azy ireo tamin'ny fananganana saina «raha tsy mampiasa Linux ianao dia vendrana ary simba amin'ny Comic Sans, iTunes ary NTFS »ianao.
Ankoatr'izay dia mampihomehy rehefa miteny ianao hoe: «Tsy manana vahaolana X aho (ny anarana rehetra lazainao dia avy amin'ny rindranasa manjakazaka amin'ny tsena), fa ao amin'ny Linux kosa dia manana A, B, C ... (izay misy ny anarana rehetra lazainao fa avy amin'ny rindranasa izay afa-tsy ianao, izaho sy roa na telo hafa, tsy misy mahalala azy ireo »»
"Veloma amin'ny hakamoana ara-tsaina" ?? Iza no nilaza fa dokotera, mpanao maritrano na mpisolovava iray dia mijaly amin'ny hakamoana ara-tsaina noho ny tsy fampiasana Linux?
Mikasika ireo faniriana tsy voafehy sy miditra an-tsehatra ho an'ny Linux mba handresy eo amin'ny birao ... Ny fisian'ny eritreritra toy izany dia mahatonga azy ireo ho monopolistic kokoa noho i Bill Gates tenany, izay nolavinay be dia be ary iza, raha tsy misy, ny fanitarana ny computing ho fantatsika anio, na tiantsika na tsia, mitondra ny anarany.
Mahatsiaro ho toy ny bandy falifaly aho, mandresy ny linux amin'ny birao MY isan'andro. Ary eny, indraindray dia mampiasa rindrambaiko vaky trano aho, na mametraka Windows misintona ho an'ny namako miaraka amina programa marobe miaraka amina nomerao piraty sintonina avy amin'ny internet ... Manaparitaka izany ny tompony, raha tsy tian'izy ireo ilay izao tontolo izao dia maneso azy toa azy ireo, manamboatra rindrambaiko tsaratsara kokoa, azo antoka na, inona no fantatro, fa manokan-tena amin'ny fiompiana akoho, izay misy teny toy ny fanapahana, fanapahana ary ny sisa amin'ny ping ... ireo don tsy misy izany.
Mamaly an'i Yeretik
Ry mpiara-miasa, hanombohana azy dia tsy miampanga olona aho, ary raha nanao izany aho dia tsy fanahy iniako izany, tahaka ny ataonao izao miaraka amin'ny hevitrao, ary mitanisa aho:
... rehefa nitora-bato ny sisa tamin'ny rafitra fiasa sy ny mpampiasa nampiakatra ny sain'ireo "raha tsy mampiasa Linux ianao dia vendrana ianao ary lo amin'ny Comic Sans, iTunes ary NTFS" ...
Azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza ao amin'ny lahatsoratro no manafika ny Operating System hafa aho? Satria amiko dia ny nataoko fotsiny dia ny milaza izay ao amin'ny Windows, izay tsy ho hitanao ao amin'ny GNU / Linux.
Mandika ny teniko avy amin'ny PI ka hatramin'ny PA ianao. Rehefa miresaka ny tsy hakamoana ara-tsaina aho dia mandray ho azy fa nanapa-kevitra ny hanomboka amin'ny tontolon'ny GNU / Linux ny mpampiasa iray, miaraka amin'izay rehetra tafiditra ao aminy, ary tsy afaka milavo lefona manoloana ireo olana voalohany miseho.
Mikasika ireo faniriana tsy voafehy sy miditra an-tsehatra ho an'ny Linux mba handresy eo amin'ny birao ... Ny fisian'ny eritreritra toy izany dia mahatonga azy ireo ho monopolistic kokoa noho i Bill Gates tenany, izay lavinay tokoa ary iza, raha tsy misy, ny fanitarana ny computing ho fantatsika anio, na tiantsika na tsia, mitondra ny anarany.
Tsy mbola niteny aho, ary tsy nanamafy koa fa te hahomby amin'ny Desktop ny GNU / Linux .. Amin'ny faritra inona amin'ilay lahatsoratra no nilazako azy? Satria ny hany zavatra noresahiko momba azy io, ary notanisiko, dia:
Ary araka ny ahitanao ny ataoko anaty fononteny (raha mikasa ianao). Tsy miraharaha aho, mampiasa GNU / Linux aho ary tsy raharahako na hahomby na tsia. Mampiasako izany ary mety amiko.
TalibanusGenericus dia hoy izy:
Voalohany indrindra ary mba hanazavana ny momba ny 1 taona lasa izay sy ny zavatra novakiako tao amin'ity bilaogy ity, azoko lazaina aminao fa tsy nila naneho hevitra velively aho, fa mahita ny zava-misy….
Eto ny olana lehibe indrindra dia ny 90% amintsika izay mampiasa Linux no mampiasa azy io amin'ny fahafinaretana, te hahafanta-javatra sns, sns. Izaho manokana dia mampiasa Windows kely ary rehefa manana fotoana kely dia mihodina amin'ny fametrahana ny andohaliko aho, ary faly amin'izany aho. Izao samy mampiasa rafitra manokana ny tsirairay satria "mety aminy" "mora" "manao izay tiako / ilaiko" sns. Raha ny ahy Windows «Just Work» dia ampiasaiko hilalaovana, tooooooooall ireo lalao kely lamaody vaky androany ao amin'ny bay piraty (tsy handoa lalao mihitsy aho izay hampiasaiko mandritra ny 10 minitra ary ho reraka aho, midika izany fa fako). Fa rehefa te-hivezivezy amin'ny Internet na hanao zavatra hafa aho ary mila mahatsiaro tena ho tsy manana ahiahy, mahatsapa fa METY mifehy ny rafitra misy ahy aho, amin'izay fotoana izay dia mampiasa linux aho ary raha mameno linux tanteraka aho dia tsy mila izany. antony hafa hampiasana azy, heveriko fa amin'ny ambaratonga lhn / mandroso amin'ny linux aho saingy araka ny filazan'i elav fa tsy maintsy mamaky ianao dia tadiavo ny "fiverenana" amin'ny zavatra, aza avela handresy voalohany, fa mazava ho azy raha tsy ianao MANDREMA fa milamina ary ampiasao ny varavarankelinao ary dia izay, faran'ny olana.
Betsaka ny milaza fa "Linux tsy hahomby amin'ny birao raha manaraka an'io na io lalana io" izao hoy aho, nisy fotoana ve nanandrana nahomby tamin'ny Linux i Linux tamin'ny fanesorana mazava tsara ny Ubuntu? Ataoko angamba fa tsy izany…. Fahombiazana eo amin'ny mpizara ary eo amin'ny birao dia fahombiazana ihany koa raha manana faharetana sy fieboeboana faran'izay kely ianao amin'ny zavatra vita tsara. Saingy mitoetra ao amin'ny tsirairay izany raha izao no tadiavin'izy ireo na tsia. Ary amin'ny mpisolovava iray, dokotera, mpanao maritrano dia misalasala be aho fa tena miahy izy raha ny rafitra fisie dia NTF, ext4, misalasala aho fa miahy zavatra momba ilay rafitra miresaka amin'ny fomba lalina kokoa izy…. (Azafady ny tsipelina, ny ahy no isa, ny tilde tsy misy ao an-tsaiko XD) Salu2 Great Blog Boys tohizo izany. Ny lahatsoratra hoe "hevitra" dia tsy natao ho an'ny flamewars fotsiny fa manome hevitra manokana.
Mamaly an'i TalibanusGenericus
david belzec dia hoy izy:
Mitovy hevitra aminao aho
Valio i David belzec
Diso ianao toa ahy io. Ny GNU / Linux dia tsy mahomby amin'ny birao satria ny ankamaroan'ny rindrambaiko tompona sy freeware dia tsy misy amin'ny GNU / Linux.
Ny fonosana ADOBE dia tsy misy ho an'ny Gnu / Linux ohatra.
Tsy hampivelatra ny Office for Gnu / Linux mihitsy i Microsoft.
Fantatro fa tsy ny hevitra hoe miady amin'ny rehetra isika fa te hanazava zavatra iray, na i Microsoft aza dia iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny kernel, ary tsy izy ireo ihany, Google, Samsung, Intel, IBM, ankoatry ny hafa.
Etsy ankilany, najanoko ny fampiasana windows rehefa nivoaka ny Windows7, tamin'izany fotoana izany dia matetika aho no nampiasa Photoshop, fa ny GIMP dia fitaovana tena tsara, hany ka amin'ny faritra sasany dia heveriko ho tsara kokoa noho ny PS izany. Ny zava-misy fa loharanom-baovao misokatra ny Linux dia tsy maharatsy azy, toy ny hoe tsy manodidina an'i Microsoft daholo ny zava-drehetra.
Tsy vitan'ny hoe manana mpandrindra tsara izy ireo ary mieritreritra aho fa ny asan'ny hafa dia tokony homena lanja mitovy amin'izany ihany, noho izany antony izany dia namporisika ny tenako aho mba hanandrana, satria amin'ny maha-developer ahy dia nieritreritra aho fa misy ny mpandrindra tena miasa ho an'ny Linux, izany hoe Tokony hankasitrahako koa «ny lafiny tsy misy vola.
Ny tsy finoanao fa miasa ho anao ny Linux dia tsy midika hoe tsy mandeha amin'ny olon-kafa izy io, jereo aho, hatramin'ny 2008 mampiasa Linux, ary na ny mpifanila vodirindrina amiko aza mampiasa azy satria nametraka azy ireo aho ary mbola tsy henoko ny fitarainany. .
Miala tsiny indray amin'ny fanehoan-kevitra nampiady hevitra, saingy nieritreritra aho fa misy teboka tokony hazavaina.
Ireto fampiharana ireto PhotoShop, Corel Draw, MS Office misy divay miasa tsara ary ny zava-drehetra dia resaka fahazarana. Tsy nisy teraka tamin'ny fampiasana Windows, Linux dia tsotra kokoa. Ankoatr'izay, Linux dia ho an'ny fampandrosoana, fitantanana ary ambiansy amin'ny asa.
Mamaly an'i kdexneo
Fampahalalana tsara inona ho an'ireo vao tonga, tokony ho marin-toetra ihany koa ianao satria ny sasany dia tsy miresaka afa-tsy ny hatsaram-panahin'i Tux fa tsy momba ny fahasahiranana mety hananan'ny mpampiasa vaovao, na amin'ny fitaovana na rindrambaiko ampiasain'izy ireo na nahazatra azy. Windows.
Ary rahoviana, amin'ny Linux, farafaharatsiny, manome anao tombony amin'ny fitantanana tanteraka ireo rindranasa napetrakao.
Ary rahoviana, OS POSIX rehetra dia ambony noho Windows.
Izany no zavatra hitako ihany koa rehefa nifindra monina aho, izay nanomboka nahatsapa fa tompon'ny solosainako fa tsy ny rafitry ny fandidiana ahy. Raha ny amin'ny fanambarana farany dia ekeko tanteraka fa ny fandaniam-bolan'ny Microsoft amin'ny fanaovana dokambarotra ankoatry ny zavatra hafa, ary koa misy ireo mpampiasa mino fa Ubuntu dia linux (ary ny mifamadika amin'izany) xq kanonika fotsiny dia mandany be amin'ny doka.
Amin'ny ankapobeny, Ubuntu dia nanjary ny fanapariahana GNU / Linux malaza indrindra teo, satria namela an'i Debian hivoatra tamin'ny lafiny maro toy ny installer graphique sy amin'ny fitantanana fonosana (na i Debian aza manana ivon-toerany manokana toa an'i Ubuntu, izy ihany no miorina ao amin'ny repos default Debian sy / na ireo izay efa namboarina tao anaty list.list).
Misaotra ny fiarahamonina Debian sy Ubuntu, afaka nanampy olona vitsivitsy nampiasa Ubuntu aho.
Manomboka amin'ny famolavolana fahazoan-dàlana amin'ny rafitra * NIX rehetra ary izany dia mahatonga azy ho ambony noho ny Windows.
UnTalLucas dia hoy izy:
Amin'ny fanajana rehetra elav, tsy nampiasa Windows 8 ve ianao andro vitsy lasa izay? Manandrana mitady distro miasa 100% amin'ny Raedon HD 6670 aho.
Valio amin'i UnTalLucas
Eny, nampiasa Windows 8 nandritra ny herinandro katroka aho noho ny antony tsy misy ifandraisany izao, fa inona no ifandraisan'ny iray amin'ny iray hafa? Miverina ao amin'ny Arch + KDE aho 😀
Ry elav malala, ny tanjoko dia ny manamafy izay lazainao ao amin'ny lahatsoratranao; ny fampiasana GNU / Linux dia tsy rosy, saingy mendrika ny fiezahana izany. Farafaharatsiny izay azoko. Ary amin'izao fotoana izao dia manoratra amin'ny asa miaraka amin'ny Windows 7 aho ... Vady iray mifamihina.
Eny, mampiasa Windows Vista SP2 32-bit sy 7.4-bit Debian 32 (Wheezy) aho. Ho azy manokana, hitako ny fampiononana amin'ny fisarako miaraka amin'i Debian, izay ahafahako mivezivezy ao amin'ny Firefox tsy misy olana avy amin'ny interface desktop (Firefox ho an'ny Windows dia mavesatra be amin'ny Windows PC miaraka amin'ny fitaovana enti-miasa).
Amin'izay tsy maintsy niaretako tamin'ny Windows, sahirana aho mampiasa azy amin'ny zavatra iray na hafa, satria tsy mamela ahy hanova zavatra maro hampandeha azy io (niezaka nanamaivana ny Windows Aero tamin'ny Vista sy 7 aho, saingy tsy nisy nilana azy daholo ny zava-drehetra. ).
Na izany na tsy izany, na ny OSX aza dia manana safidy namboarina bebe kokoa noho ny Windows.
Alma dia hoy izy:
Miarova miaraka amin'i Manjaro, tena tsara izany. Iray volana lasa izay dia nividy HP vaovao aho, nanandrana nametraka Ubuntu, Elementary, Suse, Fedora nefa tsy nahomby, avy eo nianjera avy tany an-danitra i Manjaro niaraka tamin'ny fizotrany fametrahana mora izay ahitana ny rafitra miaraka amin'ireo mpamily raha misafidy ianao. MAFY, milamina, mahafinaritra izy io.
Valiny tamin'i Almà
Heveriko fa tsy afaka miaina tsy misy feso na yakuake (heveriko fa raha nanova ny tontolo iainako aho dia nifanaraka).
Ny vadiko dia namela varavarankely ho an'ny ubuntu, satria afaka nandeha tony sy haingana kokoa izy ... fotsiny izany ary tsy te hiverina izy. Ary tsy mila mahafantatra ny terminal ianao, na zavatra hafa, amin'izay ananananao ny zavatra ilainao.
Lahatsoratra tsara elav. Tiako izany satria tena misy ny zava-misy, misy ny fahamarinana, ny hatsaram-panahy ary ny fatiantoka (miankina amin'ny endriny).
Misaotra Cookie .. Damn, amin'izao fotoana izao dia hitako ny nick sy ny avatar anao ary noana aho xDD
Ny tiana hambara dia ny maha lahatsoratra tsara ahy dia hitako fa somary malemy izy. Mety tsy ho hita koa ny lisitr'ireo zava-dratsy rehetra anananao ao amin'ny rafitra manokana ary tsy ho hitanao.
Ohatra, tsy hahita viriosy ianao, na takelaka misy ny fahafatesan'ny manga. Tsy hanana varavarana ambadiky ny solo-sainanao ianao amin'ny alàlan'ny microsoft izay manova ny rindrambaiko tsy misy fahalalanao ary tsy mahazo alalana aminao
Azonao atao ny manova ny fisehoana sy ny singa ao amin'ny rafitra miasa iray manontolo, hanana fiarovana bebe kokoa ianao, manadino ny fandefasana disk, sns, sns ...
Manonona ny tenako aho:
Raha aorian'ny famakiana izany rehetra izany (izay tsy mandrakotra ny 100% amin'ireo zavatra tokony ho raisina)Manapa-kevitra ianao fa te hahafantatra bebe kokoa, satria tsy mila mandeha lavitra ianao, eto amin'ny FromLinux dia manana fampahalalana mahasoa be dia be izahay:
Ny tanjoko dia ny tsy hiresaka momba ny tombotsoan'ny GNU / Linux, fa ny hilaza ny sasany amin'ireo zavatra tadiavin'ny mpampiasa maro avy amin'ny Operating Systems hafa ary tsy hahita, farafaharatsiny amin'ny fomba mitovy na mora. 😉
Salama Elav, izany indrindra no antony hitako fa malemy izy. Satria heveriko fa mbola milaza ny zavatra tadiavin'izy ireo sy izay ho hitany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny lafiny ilan'ny farantsakely dia tsy ampy, araka ny hevitro mazava ho azy.
Inona tokoa moa no antony tsy hanambaranay ny tombotsoan'ny Ñu-Linux amin'ireo izay manana rafi-piasana tompony?
Mety ho fomba iray itenenana ihany koa hoe, "mety ho somary sarotra kokoa ny fahazarana, ary ilaina ny mametraka ezaka sy faniriana kely hianatra zava-baovao. Fa mino aho, (ary azon'ny mpamaky omena lanja izany ), raha mendrika izany. ny fanovana.
Na izany na tsy izany, hoy aho. tsy fanakianana ilay lahatsoratra, (izay tiako indrindra), fa ho fandraisana anjara amin'ny fanatsarana azy, izany no tanjoko rehefa milaza azy.
Miarahaba anao Elav.
Eny, azoko ny U_U saingy heveriko fa ny ampahany faharoa dia efa tafiditra ao amin'ireo rohy apetrako 😀
lol, eny mazava ho azy fa misy dikany izany, saingy tiako ho tsy mazava kokoa izany, lol.
Lahatsoratra tena tsara, arahaba.
Saingy, tsy miresaka momba ny Gnu / Linux sy ny tombotsoany ny lahatsoratra raha oharina amin'ny Windows, miresaka momba ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny ankapobeny izy io. Ankoatr'izay, ny "logiciel" na "ratsy" ilay rindrambaiko dia miankina amin'ny hoe iza no handahatra azy io, tsy mila mifandray mivantana na maimaim-poana izany na tsia.
ah diso ny lahatsoratra nataoko, azafady
Geek clown dia hoy izy:
ny console izao dia tantaran'ny vehivavy antitra fotsiny ...
… Nampiasa ny GNU / Linux aho nandritra ny 12 taona teo ho eo, ary tao anatin'ny 4 taona lasa, ireo mpampiasa vaovao izay nihaona tamiko dia tsy nahalala momba ny console sy ny baiko.
Valio amin'i FrikiClown
Eny, tsy ao anatin'ny laharam-piadiana mahery setra amin'ny vehivavy aho, saingy milaza aminao aho fa lasa lavitra loatra ianao tamin'io hevitra io. Ny an'ny vehivavy amin'ny rindrambaiko dia olana saro-pady. Raha toa ka efa an'ny lehilahy hatrany ny fandaharana dia misy mazava ny fanazavana ara-tsosialy sy ara-kolontsaina afaka manazava ny trangan-javatra. Amin'izany fanehoan-kevitra izany dia takatra fa ny atidohan'ny "antitra" tsy afaka amin'ny fandaharana, fa io hevitra io dia toy ny lava-bato ka toa tsy mampino fa avy am-bavan'olona tamin'ny taonjato faha-XNUMX io. Soa ihany fa tsy ny rehetra no mitovy hevitra amin'ny vehivavy marobe hatrany no ampirisihina hanaraka fiofanana amin'ny solosaina.
Inona no tsy hita… .. lelafo iray amin'ny fiteny marina ara-politika.
tsotra fotsiny fa ny nenitoany, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy liana amin'ireo zavatra ireo ary amin'ny zavatra hafa kely, toy ny ahitanao lehilahy vitsivitsy maniry hianatra asa tsy maintsy atao amin'ny lamaody.
Mazava ho azy fa nenitoa maro no tsy liana amin'ny antony mitovy fa tsy liana amin'ny siansa, matematika, lojika, ary tsy liana amin'ny lova ara-kolontsaina lava izay sarotra tapahina, ankoatry ny hafa satria maro no mihevitra toa anao ary mampahatsapa azy ireo fa lalana amin'ny vehivavy manodidina azy ireo. Ho an'ny ambiny dia heveriko fa tsy nahatsikaritra ianao fa eo amin'ny tontolon'ny lamaody mahomby ny lehilahy, noho izany dia tsy mieritreritra aho fa ny lamaody dia raharahan'ny vehivavy antitra ihany.
ary miresaka didy, manana vitsivitsy ho anao aho ...
# configure –goto –the –kitchen
# manaova –ako –a –sandwich
Jenny T-Type dia hoy izy:
Misaotra Almà, farafaharatsiny mba hanamarihana ireo toerana tsy ankasitrahana anay ny fanehoan-kevitra toa anao. Na dia ny manazava amin'ny masinista aza ny anton'ny tsy fitovian'ny demografika amin'ny tombontsoany sy ny fiantsoana azy, raha ny marina, ara-tsosialy / ara-kolontsaina kokoa noho ny biolojika, dia hoy ny lohahevitra «sarotra tokoa, miresaka amin'ny rindrina, mampihena ny hadalanao, ny [misogyny] '. Ny ankamaroany tsy mety fotsiny.
Fa misaotra indray, tsara ny mahafantatra hoe aiza no ahitantsika fankahalana hisorohana ireo toerana ireo fotsiny ary tsy hanafana ny lohantsika, eny, tsy tianao ve ny fomba mifanohitra amin'ny masinirianina? tpt
Valio i Jenny T-Type
linmax dia hoy izy:
Salama: tonga tao amin'ny mailako io hevitra io. Izaho dia tao amin'ny Linux nandritra ny fotoana fohy (roa volana teo ho eo) saingy tiako ny milaza fa efa ela ny vehivavy no nanao ny zava-drehetra ary tena tsara, saingy mieritreritra aho fa ity karazana forum ity dia hanampy amin'ny fanatsarana ny rafitra sy ny hafa toa ahy (vaovao) izay te hanararaotra rindrambaiko maimaimpoana. Nahafantatra zavatra maromaro aho ary tiako ny manohy satria tiako ity distro (openuse 13.2 kde). Misaotra
Valiny amin'ny linmax
Gongui dia hoy izy:
Izy io no tokony ho voalohany amin'ity fomba novakiako ity ary tsy manao fampitahana toy ny hoe "Maimaimpoana ny Linux, omena vola i Windows" na hoe "Ny mpitsikilo rindrambaiko tompona dia mizaha toetra anao ary amin'ny Linux dia manana ny kaody misy ianao."
Zavatra iray, ny fanontana samihafa an'ny Windows fa tsy ny OS samihafa dia OS iray ihany miaraka amina famafana nesorina.
Valiny tamin'i Gongui
Gongui marina, toy ny fizarana toa an'i Kubuntu na Chakra, ohatra, izay afaka mampiasa ny tontolo Desktop iray ihany, saingy ao anatin'ny iray dia misy ny rindranasa izay tsy ao amin'ny iray hafa amin'ny alàlan'ny default. Noho izany ny fampitahana amin'ny Windows Editions. Misaotra nijanona.
Ity raha tranonkala manampy ny mpampiasa, ny mpifanila vodirindrina ... tsy mametraka vaovao hamporisihana ny fanjifana!
PS: Minono ity mandarin «Muylinux.com» !!
Manaiky tanteraka ny hevitr'i Morgana aho. Indray mandeha ihany aho no nanandrana nandresy lahatra ny namako iray hanandrana ny GNU Linux satria vaky ny solosaina findainy ary ny zavatra voalohany nolazainy dia: fa manana hotmail ve izy? Ary efa nolazaiko azy izany, alatsaho izany, ento any amin'ny mpiara-miasa aminao ary asaivo mametraka piraty Windows anao izy.
Ny ankamaroan'ny olona (farafaharatsiny ireo izay manodidina ahy) dia mampiasa ny solosaina hamakiana mailaka, hijerena horonantsary YouTube ary zavatra hafa ary ny hany tadiavin'izy ireo dia ny hiasan'izy ireo, fotoana. Tsy mila na mila mianatra zavatra hafa izy ireo.
Marina ihany koa fa tsy mila fanomezana ho anao ianao vao afaka mampiasa GNU Linux. Roa taona monja no niainako tamin'ny Windows ary rehefa nifindra tany Ubuntu aho dia toa mora kokoa noho Windows. Ary miaraka amin'ny fahalianana kely sy googling kely ao anatin'ny tapa-bolana dia efa nitantana azy tsara lavitra noho ny Windows aho ary ny tena zava-dehibe dia nanana fahatsapana bebe kokoa aho ny hifehezana ny zava-drehetra fa tsy ny Windows.
Lahatsoratra tena tsara saingy tsy afa-po amin'ny teboka vitsivitsy aho, mitovy amin'ny mahazatra hatrany, ny manome tsiny an'i Gnu / Linux amin'ireo olana tsy mahazatra azy ary misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny asa ratsy ataon'ny orinasa.
Mahaliana ny ampahany amin'ny lahatsoratra. Tsara ny fikasana, saingy raha ny fahitana ny pedagogy sy ny fanajana dia toa tsy mahomby mihitsy aho. Ny lisitry ny tsy ananan'i Linux (saika voalohany) dia toy ny euphemism an'ny: "Mampitandrina anao aho ary raha tsy tianao kokoa izany dia aza manatona anay." Manontany tena aho raha tetikady tsara hampifandraisana olona bebe kokoa amin'ity tontolo mahafinaritra ity ary tsia ny valinteniko. Angamba ilay teny, ny tonony ampiasaina, fa manizingizina aho, raha fanasana hahalala Linux ity lahatsoratra ity, dia holazaiko ireo primipales handalo; Ao amin'ity tontolo midadasika ity dia misy lahatsoratra, dinika ary loharanom-baovao hafa izay sariaka kokoa sy mazava kokoa momba ny dikan'ny hoe mandao Windows ary miatrika vahaolana hafa.
Ary ahoana ny amin'ilay dikanteny hoe "Veloma amin'ny hakamoana ara-tsaina"? Bravo !!! Fanatanjahan-tena tsara amin'ny fampianarana sy fampaherezana. Soa ihany, ireo paikady ireo dia efa nivoaka tamin'ny sekolintsika taloha ela be ary mety ilaina amin'ny resaka fampianarana henjana tokoa. Ho an'ny ambiny, tsy izany no fomba ezahinao hahatonga ny hafa hahita tontolo tsy fantatra.
Mandritra ny sisa dia nampiasa Linux aho nandritra ny 6 taona ary indraindray dia mila miatrika an'io tsy fahampiana Windows io aho. Misy zavatra mahatonga ahy ho tia ny tontolon'ny GNU / Linux sy ny fitsipika apetrak'ity tetik'asa ity, na izany aza nandritra ny taona maro dia namaky valiny "smug" tsy dia lehibe loatra aho ary na dia "afa-po" aza rehefa misy mangataka adaladala fanontaniana. Mazava ho azy fa tsy misy zavatra hafahafa amin'izany, satria ny mpampiasa Linux efa za-draharaha dia mpahay siansa solosaina tsara, fa tsy pedagogue ary hadinony mora foana fa ny fianarana dia mitaky be noho ny hafa, ary na Torvalds na Van Rosum aza dia tsy nateraka nianatra.
Marina ny hevitrao, satria mitombina ihany koa ny manazava fa tsy nianatra pedagogy aho, koa sarotra be amiko ny mampihatra azy amin'ny fotoana iray. Ny tanjoko dia ny tsy hanao zoom na hanao zoom, mba hilaza ny marina fotsiny. 😉
Satria tsy maintsy mianatra zavatra be dia be ny olona iray (amin'ny ankapobeny manana fahaizana amin'ny solosaina) vao afaka mampiasa rafitra iray, dia tsy midika akory izany hoe mila mianatra zavatra be dia be ny olon-tsotra (Facebook, "guasap" ary CIA). Heveriko fa marina ny anao manoratra lahatsoratra toy izany amin'ity tranonkala ity satria amin'ny ankapobeny ireo olona izay "mikaroka" dia manana solosaina. Ny sasany hiantso TI fotsiny. Mazava ho azy, tsy manana feo "mpivarotra" bebe kokoa ianao.
Tsy toy izany. Ny olona tsotra dia afaka mampiasa Linux tanteraka nefa tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina. Fantatro satria fantatro izy ireo.
Ny raiko dia ohatra tonga lafatra amin'izany.
OK OK. Heveriko fa ny zavatra tsara dia ny mianatra mifameno amin'ny maha fiaraha-monina anao, sa tsy izany?
6 volana lasa izay dia niditra tamin'ny tontolon'ny linux aho ary nahaliana ahy izany, heveriko fa tontolo iray tokony hitrandrahana amin'ny lahatsoratra feno sy tsara indrindra
Ireo fanehoan-kevitra, nataon'ny mpanoratra ny lahatsoratra, dia toa marina tokoa sy marina.
Mihevitra ny tenako ho zazavao aho, eo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux. Hatramin'ny, volana aogositra lasa teo no nampiasako azy. Saingy, mbola mianatra zavatra vaovao isan'andro foana aho. Ary tena mahaliana ahy ny fahafaha-manamboatra azy. Ary ambonin'izany rehetra izany dia mila mitady fiainana ianao (google, forums, wiki ... sns) hamahana ireo olana kely mety sendra anao, amin'izay afaka manohy mianatra isan'andro isan'andro.
Tadidiko ny andro nitondrako ny Linux voalohany satria sosotra loatra tamin'ny Windows aho. Isaky ny mamolavola ny pc aho dia tsy maintsy mitady programa sy antontan-taratasy hametrahana DVD mihoatra ny 50 (fampijaliana), tsy afaka manova na inona na inona ao amin'ny OS aho, dia voan'ny virus foana ny pc-ko, sns ...
Marina fa tamin'ny andro voalohany tokony hampiasako ny kaomandin'ny baiko, dia nanevateva na taiza na taiza aho, saingy tamin'ny fanoloran-tena, ny fikarohana ary ny neurons miasa roa izay tantiko. Linux dia miova isan'andro isan'andro ho lasa tsara kokoa. Tsy haiko raha hiverina any Windows aho fa tsy hiala amin'i Linux mihitsy aho.
Fandaharana, lalao ary maro hafa no azo apetraka amin'ny divay.
World of Warcraft, miasa miaraka amin'ny naoty platinum.
80% ny lalao sy seho nivoaka talohan'ny 2010
90% ny lalao sy seho nivoaka talohan'ny 2005
Ny sasany hafa dia sarotra be ny mametraka azy ary tsy maintsy fantatrao ny fomba famakiana ireo hafatra diso. Saika ny zavatra rehetra azo atao
Tsy haiko, fa noho ny Steam ho an'ny Linux dia nahita lalao maro kokoa aho (na F2P na karama), ary ny marina dia mihazakazaka kokoa noho ny Windows izy ireo.
Ary halako koa ny fampiasana divay satria matetika ny aretin'andoha manandrana mampandeha programa Windows izay mandeha tsara ihany koa amin'ny GNU / Linux.
mrgm148 dia hoy izy:
Mamaly an'i mrgm148
Tena tiako ilay lahatsoratra arahaba anao
Sombim-panombohana ho an'ny tontolon'ny wildebeest.
tsy misy isalasalana ny fomba tsara indrindra hampahafantarana ny olona rehetra ary avelao izy ireo hanapa-kevitra raha hisafidy ny pilina manga na mena.
Mety tsy apetraka amin'ny gui mihitsy ny terminal fa io no manome valisoa lehibe indrindra, na izany na tsy izany dia misy hatrany ny tontolo mahomby sy mamaly toa ny GNOME.
Hahaha, izao dia tonga ao an-tsaiko i Morpheus .. Misaotra
Lahatsoratra tsara tokoa @elav, tena tsara, tsara fa mazava isika, amin'ireo zavatra tsara sy ratsy an'ny penguin malalantsika.
Misaotra F3niX 😉
Jose Fernando dia hoy izy:
Tiako ny lahatsoratrao, ary tena marina ny lazainao, indrisy ho an'ny asako dia mbola mila mampiasa boot roa heny aho, antenaiko fa ho fantatr'ireo orinasan-rindrambaiko manana fa maro ny mpampiasa Linux
Valiny tamin'i Jose Fernando
Tsy misy na inona na inona hampiasa Dual Boot. Raha tsy maintsy ataonao dia mila ataonao 😀
CristJian dia hoy izy:
famerenana tsara, indrindra handao ny tahotra handao ny faritra mampionona, hianatra zava-baovao ary hiaina traikefa vaovao amin'ny SO, mampiasa Elementary OS Luna aho ary afa-po, atoro anao 😉
Valio amin'i CristJian
Faly aho. ElementaryOS dia fizarana tsara 😀
Taorian'ny efa ho herintaona namakiana lahatsoratra tao amin'ity bilaogy ity, ary efa telo taona Linux, androany tamin'ny 1:00 maraina aho no nisoratra anarana hilaza izao manaraka izao:
Lahatsoratra tena tsara, fampahalalana tena marina na dia tsy tian'ny maro aza, misaotra.
Manaja anao aho manao ahy. Misaotra betsaka!!
Oh raha nahita an'izany ny raiko. Mbola nila niteny taminy bebe kokoa na kely aza aho. Lahatsoratra tena tsara elav.
Aaron M. dia hoy izy:
Mikasika ny iTunes, azo ampiana fa ankoatry ny mpilalao, ho serivisy hividianana atiny multimedia eto amin'ny GNU / Linux dia manana safidy hampiasa ny Google Play izahay.
Valiny tamin'i Aaron M.
Tiako ny fomba ilazalazana ny mahatsara sy maharatsy azy.
Tena marina ny lohahevitra fa izay miteraka tahotra lehibe indrindra indraindray dia ny fiovan'ny fomba fisainana; fa ho an'ny mpampiasa mahazatra (vakio ilay mampiasa FB, Youtube, Email) Linux dia tsara lavitra ary tsy mila mahafantatra akory hoe misy ilay terminal ohatra.
Rehefa zatra Linux ianao dia sarotra ny mampiasa Win $ amin'ny solosaina hafa.
Miarahaba anao Elav, lahatsoratra tsara sy tranokala tena tsara.
Araka ny nolazaiko hatrany, ny olana dia mahazatra kokoa noho ny zavatra hafa rehetra; Matetika amin'ny ankamaroan'ny tranga dia amidy miaraka amina Windows ny solosaina, "mianatra" sy zatra io OS io ny olona, ​​ankoatry ny zava-misy fa ny sekoly sy ny foibem-pampianarana hafa dia mampiasa Windows ihany koa, izay miteraka mpampiasa babo betsaka; Na izany aza, raha ny mifanohitra amin'izay no izy, hatrany am-piandohana ary indrindra any an-tsekoly, GNU / Linux no nampiasaina, dia "ho zatra" izany ny olona ary hahatsapa ho zavatra voajanahary izany.
Raha tsy izany, lahatsoratra tena tsara ...
Raha marina. Mino tanteraka aho fa ny olona tsy mpankafy solosaina, tsy mahalala hoe inona izany OS izany, noho izany dia miharihary fa tsy mahalala safidy hafa ankoatry ny Windows izy ireo.
Avy amin'ny fampahalalana (sy dokam-barotra) izay manodidina antsika isan'andro no ahafantarantsika fa: ny vokatra Apple dia manana Mac OS OS azy ireo ary ny hafa kosa miaraka amin'ny Windows amin'ny PC, ary Android amin'ny takelaka.
Izay no antony isalasalako fatratra fa ny olona iray ivelan'ny computing dia afaka mamaly ny fanontaniana hoe "Inona no ao amin'ny PC-nao?" ary hanontany antsika izy «Inona no atao hoe OS?». Dintinto dia raha manontany isika hoe "Inona no Windows manana ny PC-nao?"
Misaotra an'izay rehetra naneho hevitra! Manantena aho fa handinika izay tena hita fa manakana ny mpampiasa vaovao indraindray.
Jean Carlos dia hoy izy:
Fidirana tsara, satria tena rehefa nanao ny fanovana ho GNU / Linux aho dia nieritreritra fa ho toy ny Windows izany ary ho vonona ho ahy ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i Jean Carlos
Tsipiriany fotsiny, tsy misy Windows 8 Ultimate.
Tsia tsia? Hahaha .. Nieritreritra aho 😛
Elav, mamiratra fotsiny ity lahatsoratra ity. Mba hampisehoana ireo olona rehetra mikasa ny hanomboka ny dia mankany Linux. Lahatsoratra iray tena misy sy tsy azo ekena. Ole!
Misaotra Lorenzo, faly aho fa tianao izany.
Daniel De la Rosa dia hoy izy:
Miavaka, tsara be fotsiny. Mampalahelo fa namaky ny tantaran'ny aloka aho [lambradelhelicopter.com] ary na dia mampihomehy sy mahery amin'ny lafiny iray aza izy, dia manentana ny fanahy hamaky ity endrika fahatakarana ity amin'ny linux, hahatsapa fa hiantso azy ireo sangany. Misaotra avy amin'ny linux, nampitsiky ahy izy ireo 🙂
Valiny tamin'i Daniel De la Rosa
Eny, inona no holazaina, lahatsoratra tsara.
Raha nanomboka teto amin'ity tontolo ity aho dia nampiasa Windows XP, saingy afaka andro vitsivitsy dia afaka nanjary zatra ny Ubuntu aho ary lasa liana kokoa tamin'ny informatika, noho ny fahalianana te hahafanta-javatra fotsiny. Avy eo dia nankany amin'ny Xubuntu, Debian + Xfce aho ary manandrana ny openSUSE KDE, na dia tsy distro tena mahafinaritra amin'ny lafiny sasany aza (io no nanome asa be ahy indrindra).
Rentsika foana fa "Windows dia tsara noho Linux", ka dia nanomboka nandray an'io teoria io ho marina aho nefa tsy niady hevitra. Saingy, na dia marina aza fa ao amin'ny Windows dia misy zavatra mora atao kokoa, heveriko fa ny olana lehibe indrindra dia rehefa misy zavatra tsy mandeha ary tsy fantatrao ny antony. Tsy mora ny mahita ny vahaolana.
Efa zatra GNU / Linux efa ho 4 taona izao aho ary zara raha mampiasa Windows 7 amin'ny lalao XD sasany. Ka satria ny "Windows dia tsara kokoa noho ny Linux", heveriko fa afaka manao zavatra mitovy amin'ny ataoko isan'andro amin'ny GNU / Linux, na izany aza, dia nahita olana vitsivitsy aho:
1) Sambory ny efijery
Ao amin'ny GNU / Linux dia atao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra PrintPant ary avy eo ny varavarankely dia manome antsika safidy momba ny fomba hakana sary sy izay tokony hatao amin'ilay sary.
Amin'ny Windows ... tsy fantatro ny fomba. Toa taorian'ny nanindriana ny PrintScreen dia ilaina ny manokatra ny programa «Paint» ary manitsy ny sary avy eo.
2) Zarao amin'ny vakony (Thunar) na eo afovoany (Nautilus, Dolphin) ny varavarankelin'ny mpitantana ny rakitra.
3) Ahitana sary ISO.
4) Mampifandray fitaovana sasany. Amin'ny ankapobeny raha hampiasa azy ireo ianao dia mila mampiasa ny CD fametrahana miaraka aminy.
Azoko fa ny fivadihana amin'ny Windows mankany GNU / Linux dia tsy tsotra, fa tsy ny mifanohitra amin'izay ihany koa. Ao amin'ny GNU / Linux dia tsy dia ilaina loatra ny mametraka rindrambaiko fanampiny amin'ny boot voalohany, satria efa ananantsika ny zava-drehetra: fifandraisana Internet (na dia amin'ny karatra tambajotra Wi-fi sasany aza), mpitety tranonkala, seha-birao, mpilalao audio / video, tonian-dahatsoratry ny sary, mpitantana rakitra, mpamaky rakitra pdf, sns sns.
Denieser dia hoy izy:
Nampiasa ny Microsoft Windows nandritra ny taona maro aho, andao lazaina fa ho an'ny fanamorana na amin'ny faritra misy ahy dia be mpampiasa (Venezoelà) ny fampiasana azy, ary fiovana 360 degre ny fifindrana avy amin'ny Windows mankany Linux. fa misy zavatra manokana momba ny windows sy linux izay tsy maintsy tadidintsika. Ohatra, iza no mahatadidy ilay antsoina hoe Microsoft Windows Millenium, ny tsy fahombiazan'ny Microsoft tamin'ny vanim-potoana arivo taonina vaovao, Windows 2000 na ireo kinova ofisialy sy tsy ofisialin'ny Windows xp. Betsaka amin'izy ireo no narary andoha tamin'izay nampiasa azy.
Na dia vao haingana aza ny fampiasana Linux any Venezoela, isan'andro dia mahasarika mpanaraka maro kokoa izany. Tadidiko fa tamin'ny vao nampiasa Linux aho dia niaraka tamin'ny kinova Linspire somary hafahafa ihany, somary hafahafa ihany, saingy liana amin'ny tontolon'ny Linux aho; avy eo nampiasa Ubuntu sy Edubuntu aho tao amin'ny version 6.04 ary taty aoriana (mbola manana ny cd live nalefako maimaim-poana), saingy vao mainka mahaliana ahy ny fampiasana ny linux (ary azoko antoka tokoa fa ampiasaina hampiasaina isan'andro izy io ) dia ny fananana finday misy fizarana linux; ny Nokia N900 miaraka amin'i Maemo 5 ho toy ny rafitra miasa. Ekeko fa tsy mora ny mametraka rindranasa na mamaha olana amin'ny fiasa Linux, tsy maintsy mamaky, mamakafaka, mitady hevitra samihafa ianao ary manam-paharetana tokoa, saingy mahazo fahafaham-po ianao amin'ny fahitana azy miasa.
Amin'izao fotoana izao dia manana solosaina finday misy linux (ubuntu 12.04 lts) sy windows (windows 7) aho, ho fanampin'ny N900 ary ampiasaiko matetika izany ary afaka milaza zavatra aminao aho, tsy mora izany, saingy tsy azo atao izany; fa ny fahafaham-po amin'ny fampiasana azy dia lehibe kokoa noho ny fampiasana OS hafa
Valiny tamin'i Denieser
pixonct dia hoy izy:
Raha ny hevitro fanetrentena. Nopetahan'ny lahatsoratra. Miarahaba anao.
Mamaly an'i pixonct
Vaovao amin'ny GNU / Linux ve ianao? Ity dia zavatra tokony ho fantatrao »
RAR FORREST, RUN !!!
Raha tsy hampiasa izany amin'ny serivera ianao, dia aza atao sarotra ny fiainana ...
Raha manome anao ny hoditra ianao dia mividiana Mac - tena manokana sy mpitsikilo, saingy MIASA tsy misy odyssey isan'andro akory.
Raha efa mampiasa Windows ianao dia tohizo izany banga izany, raha efa handoa lisansa vaovao ianao dia afaka manandrana Linux ...
FA TSY MISY INDRINDRA, TSY MBOLA HITANAO IZAO FA HANALEHANA NY FIAINANAO !!!
AZA MANAO NY TSY FAHAMARINANAO, LINUX EFA !!!
Luis Antonio SA dia hoy izy:
hahhahah, samy miteny amin'ny fomba fijeriny daholo ny tsirairay
Valiny tamin'i Luis Antonio SA
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, na izany aza, ambany ny fahalalako ny informatika, sahirana aho mitady vahaolana amin'ny olako, ary faly amin'ny Debianako aho, saingy tsy dia mampiasa firy amin'izany aho, na dia manome ahy ny serivisy aza izany. Mila ... aho.
cidh dia hoy izy:
Manazava amiko izy ireo, raha tsara fanahy izy ireo, raha azo antoka fa azo antoka ny linux? Satria namaky lahatsoratra mahafinaritra be aho: fa raha ny rafitra mpampiasa sy ny tombontsoanao dia manakana ny rafitra tsy ho voakasik'izany, dia raha tsy fahita firy ny malware (Trojan, spyware ...) ary vitsy ihany no kely indrindra tsy manao na inona na inona, raha izany no izy Ny sasany amin'izy ireo dia tsy ho afaka mamindra tsara ny rafitra na mahatratra ny iraka ampanaovina azy noho izany sy izany, fa raha misy ny fahalemena kely dia ahitsy ho azy, saingy, etsy ankilany, amin'ny bilaogy sasany, toy ny "elladodelmal" (. com), sns, ary ao amin'ny Fanehoan-kevitra avy amin'ny toerana sasany dia miresaka fitrandrahana, fanafihana, ny fahalemena dia tsy voamarika ary voahitsy haingana, raha ny fiakaran'ny tombontsoa, ​​ny fifehezana tanteraka ny rafitra, raha ny nsa, (sy farany, diso fanantenana aho..) iza no mandainga? Marina ve izany sa paranoida sa ahoana izany?
Ary farany ... ny fizarana toy ny mint na ubuntu ve dia azo antoka / matanjaka toy ny hafa rehetra? tsy izany ve? Sa tsy maintsy manitsy azy ireo ianao, manaraka ny toro-làlana, manamboatra azy ireo mba hisian'ny filaminana bebe kokoa? na ny firewall na mamela zavatra ... izany, misaotra. Fantatro fotsiny fa tsy mahalala na inona na inona aho 🙂
Mamaly an'i cidh
Ny lesoka apetrany amin'ny gnu / linux dia tsy izy manokana, fa ny indostria izay tsy te hahalala na inona na inona momba ny rindrambaiko maimaimpoana - misalasala izy ireo ny tsy hifehy ny mpampiasa intsony - manova matetika ny format .doc ny microsoft ka matetika tsy azo ampiasaina any ivelan'ny Office. Miaraka amin'ny olan'ny mpamily ny carte de graphique dia eo amin'ny toerana iray ihany isika, a priori tokony tsy hisy fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana sary eo amin'ny linux sy ny fandresena - dia ny linux no mahazo tombony kokoa satria tsy mampiasa antivirus-, fa ny tena izy dia mpamily tompona vola Avelany betsaka irina, indrindra ao amin'ny AMD ary ratsy kokoa noho ny amin'ny windows ny zava-bita.
Miarahaba anao ry elav, toa tsara amiko ny lahatsoratrao fa tsy mampatahotra ahy fa manosika ahy hanohy hanadihady bebe kokoa. Manomboka amin'ity tontolon'ny GNU / Linux ity aho. ary te hianatra bebe kokoa aho.
dandan dia hoy izy:
tena tsara arakaraka ny namakiako ny fahalianana bebe kokoa dia bilaogy tsara ho an'izay tia azy aho raha eto no ahitako ny fampahalalana tadiaviko rehetra avy amin'ny linux dia ho arahaba tsara
Mamaly an'i dandan
loharanom-baovao dia hoy izy:
Ny rafitra linux tena feno sy mora ampiasaina dia mint, eto ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny linux mint http://aceleratusistema.blogspot.com/2014/11/prueba-linux-mint.html
Valio ireo loharano
Te-hampiasa linux efa ela aho ary mahasarika ny saiko izany satria efa namaky sy nahazo vaovao tsara momba an'io aho fa rehefa manandrana aho dia manana olana foana ary ela loatra ny famahana azy ireo dia manontany tena aho raha mandray tombony amin'ny linux na manandrana mampandeha azy aho. Heverina fa fitaovana hampiasana sy hanararaotana izany fa tsy olana be loatra tsy maintsy tadiavina hamahana ary indrisy fa io no nanjo ahy, ka mila manohy làlana hafa aho. Mbola liana te hianatra hampiasa azy io aho satria te hanana filaminana bebe kokoa, fiainana manokana ary fahalalahana hanamboatra azy io sy hankafiziko azy, izay no re, vakiana ary ampanantenaina ao amin'ny Linux. Misaotra anao tamin'ity forum ity satria tsy manana olona liana hiresaka sy hiresaka momba ireo olana ireo aho.
Lahatsoratra lehibe, feno tokoa, ary ambonin'izany rehetra izany dia nahatonga ahy hisaintsaina ny zavatra rehetra nianarako nandritra ny 8 taona niaraka tamin'ny GNU / Linux amin'ny ankapobeny, misaotra anao.
Baldho 16 dia hoy izy:
Mahagaga ahy izany ary marina tokoa, manantena izahay fa ireo izay vao manomboka ary maninona, ireo efa za-draharaha no manome ny heviny, ny heviny, ny zavatra niainany sns ...
Mamaly an'i Baldho 16
Nampiasa windows nandritra ny taona maro aho, nametraka ubuntu koa ...
indrisy rehefa miteny aho hoe, izao raha mitazona ny linux ho rafitra lehibe indrindra aho, ny laptop-ko dia manolotra tsy fahatomombanana foana, hafanana be loatra, mikatona ny fisokafana amin'ny fotoana rehetra rehefa manao antontan-taratasy lava be amina endrika be loatra aho, dia toy izany koa no mitranga rehefa mampiasa «formulaire isan-karazany» ,…. Manokatra ireo rakitra ireo ihany aho amin'ny msoffice ary miasa izy ireo nefa tsy misy olana…. Noheveriko…. endrikao ary apetraho indray ny ubuntu ... mitohy ny olana, hoy ny lojika, mitovy ihany ary manana olana kely ny fisie ....
Nanao azy ireo indray aho hatramin'ny voalohany ary nanoratra ny zava-drehetra indray aho…. gaga… .. mitohy ny lesoka….
Ny laptop-ko ankoatr'izany dia hafanana mafana be ambonin'ny 80 °, manana mpamily tompony sns ...
raha fintinina dia manana traikefa ratsy amin'ny ubuntu aho, ny distro tokana miasa 100 satria tokony hiasa izy rehetra dia suse ilay kinova voaloa ...
Ratsy loatra ka olana maro no mahazo anao, tamin'ny voalohany dia niatrika zavatra maro koa aho, tena nahasosotra ahy izany, saingy tamin'ny fandehan'ny fotoana dia nihatsara ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny fanohanana, mampiasa Ubuntu aho, saingy tamin'ny voalohany dia nanandrana distros 30 isan-karazany aho , na i Fedora aza, ny ratsy kokoa noho ny nataoko, dia nanome ahy olana foana izany, tokony misafidy hafa ianao, toa ny Mint, miorina amin'ny Ubuntu na Debian mihitsy, aza kivy, ny tombony azo dia ny mianatra mamaha ireo olana ireo , Tsy mampiasa varavarankely intsony aho, raha tsy ilaina toy ny rehefa mila manamboatra PC aho, fa izaho kosa nilaozany manokana.
Mampiasa Linux eo amin'ny birao ny orinasako, zavatra hafa amin'ny birao Linux izao
Mpanoratra horonantsary tsotra: Ny fanoratana ny Desktop anao amin'ny Linux dia tsy mora kokoa